Gịnị Bụ The Best Book na-echekwa na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ The Best Book na-echekwa na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 26/09/2020)
E nwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ na-amasị njem. Otu nke ndị i nwere ike ịnụ Ọtụtụ bụ ikike nwere ọhụrụ na-akpali akpali ahụmahụ. Gịnị na-eme njem mara mma bụ na àgwà dị iche iche ga-ụtọ site dị iche iche ihe. Adrenaline junkies were ezumike ezumike, achọ obi ụtọ nke ubé ize ndụ ọnọdụ. foodies gaa ọhụrụ ebe ha na-atọ ha efere na-akpali akpali ọhụrụ flavors. Ma n'ihi na bookworms n'etiti ndị njem, ọba akwụkwọ na akwụkwọ na-echekwa nwere ike ịbụ ndị kasị mma ebe na ụwa. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site Europe na-achọ ndị kasị mma akwụkwọ na-echekwa na Europe ileta ụgbọ okporo ígwè, anyị nwere a aro ole na ole n'ihi na ị:
France Best Book echekwa – Shakespeare & Company, Paris
France bụ a ụtọ obodo, na Paris bụ ya kasị ama ebe. Mgbe nka ụdị eche nke Paris, Notre Dame na-echeta, mara mma isi-iyi na udara osisi na otuto. Ọ bụ kpomkwem echiche ị ga-ahụ mgbe ị gara Shakespeare & Company, along with fantastic ambiance of books inside.
Ọtụtụ ndị so dee (tinyere Ernest Hemingway na Voltaire) nọrọ oge na-ede ihe a narị afọ nke 17 ụlọ. The mma mee nke ochie shelves na akwụkwọ, tụkwasa n'ime ọtụtụ obere ụlọ na nooks. The akwụkwọ ụlọ ahịa sprawls abụọ ala, na si n'èzí yiri nnọọ obere karịa na ọ bụ. Shakespeare & Company na-akwado mgbede ihe na-ede akwụkwọ agụ, nke bụ ihe ọ kpọrọ akwụkwọ ga na-atụ uche.
Venice bụ otu n'ime ndị kasị ihunanya na-achọ obodo na Italy, ọ bụkwa n'ụlọ otu n'ime ndị kasị ama kacha mma akwụkwọ na-echekwa na Europe. Libreria Acqua Alta a maara nke ọma maka na ịchekwa akwụkwọ na bathtubs na ọbụna a gondola. E nwere ndị ọzọ nchekwa ebe oke, dị ka bọket na ndị ọzọ sere n'elu arịa. Ọ na-atụmatụ a steepụ mere kpamkpam akwụkwọ ochie na ya azụ owuwu ụzọ mbata.
Na ya mara mma n'ime ime, Library na High Water Venice bụ ịrụ ụka adịghị oké ọnụ ahịa a nleta na ga-obi ụtọ ọ bụla akwụkwọ n'anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwere ya maka onwe gị na-efu n'ime, gị mma nzọ na-aga n'ebe ahụ dị ka n'oge na-adịghị dị ka ọ na-emepe na ụtụtụ.
Maastricht na Netherlands nwere ike ịbụ n'elu bụla njem nleta chọrọ ndepụta. Otú ọ dị, ọ kwesịrị ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya akwụkwọ na-echekwa na akwụkwọ akpan akpan. Dominicans ma ọ bụ Selexyz Dominican Church na obodo a bu obodo a 700 afọ Ọdịdị wuru na iche n'ụdị nke Gothic ije.
Ọ bụ breathtaking n'èzí na minimalist na n'ime. Dominicanen na-jubigakwara ókè na a ìgwè mmadụ nke bụ utu aha ndị ga-obi ụtọ ọ bụla akwụkwọ n'anya obi. I nwere ike jidere a kọfị na ịdọkapụta Cafe mgbe ị na-agụ a akwụkwọ. Nhọrọ, ị pụrụ ịnụ ụtọ kediegwu echiche si n'elu n'ala.
Brussels ka Maastricht Ụgbọ oloko
Antwerp ka Maastricht Ụgbọ oloko
Liège ka Maastricht Ụgbọ oloko
Charleroi ka Maastricht Ụgbọ oloko
Cook & Book bụ a na-adọrọ mmasị akwụkwọ ụlọ ahịa na restaurant dị na Woluwe-Saint-Lambert, Belgium. Ezie na ọtụtụ kacha mma akwụkwọ na-echekwa na-enye ụfọdụ nri na ihe ọṅụṅụ, Cook & Book na-ewe echiche a bit n'ihu. Ọ-enye gị ohere anọdụ ala a nri gbara ya gburugburu dị iche iche akwụkwọ. Na-eme ka ọ ebe dị mma maka ndị na-amasị na-enwe ma ọma akwụkwọ na ezigbo nri. Ihe ọzọ bụ na, ọ bụ na-abụghị ihe ị ga-enwe ụbọchị ọ bụla.
Njikere gaa ụfọdụ ndị kasị mma akwụkwọ na-echekwa na Europe? Ị nwere ike ịga njem banye ụgbọ okporo ígwè Paris na Venice, nakwa dị ka na Netherlands na Belgium. AKWỤKWỌ gị tiketi n'oge na-amalite na-eme atụmatụ gị akwụkwọ indulgence na gị ọzọ ezumike!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-book-stores-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / ja ma ọ bụ / tr na ndị ọzọ asụsụ.
#akwụkwọ #akwụkwọ #bookstore #bookstores #traveleurope